Barack Obama oo Trump ku dhaliilay qaabka uu u maareeyay faafitaanka cudurka Coronavirus - Calanka.com
Barack Obama oo Trump ku dhaliilay qaabka uu u maareeyay faafitaanka cudurka Coronavirus
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweyne Trump si adag ugu dhalliilay qaabkii uu u maareeyay faafitaanka cudurka coronavirus.
Obama ayaa qaabka ay dowladda Mareykanka u wajahday cudurkan ku tilmaamay masiibo ba’an oo jahawareer abuurtay, waxa uuna dhibaatada ka dhalatay cudurkani ku eedeeyay qaabka dowladnimo ee maamulka madaxweyne Trump.
Obama oo la hadlayay kaaliyeyaashiisii hore iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in dhibaatadu ay tahay in maamulka Trump uu u fikiro qaab ah “maxaa iigu jira” sidaa awgeedna uu ku afceliyo dadka kale.
Kayleigh McEnany oo arrimaha warbaahinta u qaabilsan Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu cudurkaasi u maareeyay si wanaagsan isla markaana la badbaadiyay nolal badan, balse marnaba si toos ah uma aysan magaabin Obama.
Gudaha Mareykanka in kabadan 77,000 oo qof ayaa u dhintay cudurka coronavirus, halka 1,200,000 oo qof uu ku dhacay, waana tiradii ugu badnayd ee cudurkani uu ku dhaco caalamka oo dhan.
Gobollo badan oo dalkaasi ah ayaa bishii Maarso xayiraado ku soo rogay shacabkooga balse intooda badan hadda ayay khafiifinayaan xayiraadahaasi, waxaana dadka loo ogolaanayaa in ay shaqooyinkooda ku laabtaan.
Balse khubarada dhanka caafimaadka ayaa arrintan ka digaya, waxa ayna sheegayaan in ay suurtagal tahay in cudurkaasi uu dalkaasi ku sii faafo.
Madaxweyne Trump ayaa in muddo dhayilsanayay cudurkan, waxa uuna bishii Febraayo uu sheegay in aysan jirin halis weyn, oo cudurkaasi uu iska dhammaan doono, balse bartamihii bishii Maarso ayuu qiray halista cudurkan ku hayo dalkaasi Mareykanka.
Bishii Abriil ayuu jeediyay hadal muran dhaliyay oo ahaa in haddii dadka la waraabiyo jeermis-dilaha lagu farxasho looga gaashaaman karayo cudurkan, arrintaa oo ay markiiba ku gacan seyreen khubarada caafimaadka.
Usbuucii la soo dhaafay ayuu madaxweyne Trump shaaciyay in uu kala dirayo guddigii la tacaalidda cudurka Covid-19, balse markii dambe ayuu sheegay in guddigaasi uu haatan diiradda saarayo sidii xayiraadaha loo qaadi lahaa isla markaana dalka dib loogu furi lahaa.
Dhawaan ayay ahayd markii Katie Miller oo ah kaaliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxwayna ku xigeenka Mareykanka laga helay cudurka Coronavirus, maalin uun ka dib markii xubin ka tirsan shaqaalaha Aqalka Cad laga helay cudurkaasi.
Waxaa sidoo kale karantiil lagu sameeyay xubnaha qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxwayna ku xigeenka.
Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxwayne Trump iyo ku xigenkiisa imika maalin walba laga baaro cudurka islamarkana ilaa iyo imika aan feyrsika laga helin.
Madaxwayne Trump ayaa sheegay in uusan ka walaacsanayn feyriska ku soo fidayo aqalka cad.